Ny filoham-pirenena mivady no hitsena sy handray an-tanana azy voalohany eo ampahatongavana eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato, ny zoma 6 Septambra tolakandro. Hitohy amin'ny fitsidihina eny amin'ny Lapam-panjakana Iavoloha izany.
Hisesy ny fihaonan’i Papa Ray Masina amin'ny mpitondra sy ny mpanao politika ary ny firaisamonim-pirenena. Hihaona amin’ny fianakaviamben’ny Fiangonana katolika izy. Hitarika lamesa lehibe eto Antananarivo i Papa François ny alahady 8 Septambra.
Hiazo ny Nosy Maorisy izy ny alatsinainy 9 Septambra ary miverina eto Madagasikara ny harivan'io ihany.
Ny talata 10 Septambra ny Papa no hiverina hitodi-doha any Vatican.
Nanipika ny Arsevekan’Antananarivo Mgr Razanakolona Odon Marie Arsène fa tsy ho tratra amin’io fitsidihan’i Papa François io ny fananganana ho Olomasina an’i Victoire Rasoamanarivo Olontsambatra.
(Sary Gasypatriote: Soamandrakizay ambadiky ny Paul Minault Androhibe)